Dhimashada Gaadiidka 'Metro Gebze' ayaa yaraanaya | RayHaber | raillynews
HometareenkaMashruuca Metro Gebze ayaa hoos u dhacaya
30 / 03 / 2018 tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Metro, TURKEY
Duqa magaalada Gebze Adnan Köşker ayaa yidhi, "Imaatinka tareenka dhulka hoostiisa kadib 2023, culayska saaran taraafikada ayaa si aad ah hoos loogu dhigi doonaa".
AK Party oo Balaadhiyey La-talinta Dawladaha Hoose; Duqa magaalada Gebze Adnan Köşker, oo soo bandhigay bandhig ku saabsan mashaariicda iyo adeegyadii laga heli lahaa Gebze, ayaa yiri: waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo dhammaan taageerayaasheena iyo shacabkeena qiimaha leh ee Gebzeli halkaas oo aan ku helnay aqoonsi magaalo casri ah mashruucyadeena iyo adeegyadeena. ”
Adnan Köşker, Duqa Magaalada Gebze, wuxuu ka qeybgalay Kulankii La-tashiga ee Dawladaha Hoose oo la balaadhiyay oo ay soo qabanqaabiyeen AK Degmada Gebze ee Degmooyinka; Soo bandhigid ayaa laga sameeyay mashaariicda iyo howlihii ay ka heli jireen Gebze. Cusmaan Xamdi Bey Xarunta Xarunta Dhaqanka ee kulanka Kocaeli Kuxigeenka Duqa Zekeriya Ozak, Duqa Magaalada Gebze Adnan Köşker iyo xaaskiisa Ragibe Lady, Kuxigeenka AK Xisbiga Kooneli Abdullah Eryarsoy, Gudoomiyaha AK Xisbiga Degmada Gebze Irfan Dejinta, Gudoomiyaha AK Party ee Darica Muzaffer Mustache , Guddoomiyaha Xisbiga AK Party Dilovası Cusmaan Akbulut, AK Party Kocaeli Kuxigeenkii hore ee Eyup Seting, Kuxigeenka Mayors Nilay Ayran, Engin Fine, Sadik Albayrak, xildhibaano, Gudoomiyaha Xisbiga AK Party Gebze Senay Cebelli Hogaamiyaha, Madaxa Xisbiga AK Party Gebze Ayhan Ayhan. Yilmaz, Duqa Sakir Bitmez iyo maamulayaasha ururka AK Party iyo xubno lataliyeyaal ah ayaa kasoo qeybgalay.
Soo hel MAYA
Khudbadiisa furitaanka, Gudoomiyaha AK Party Gebze İrfan Ayar ayaa khudbad salaan ka qaatay wuxuuna yidhi, iyor Waxaan u gudbineynaa codsiyadii shirarka iskuduwaha xaafadaha degmada aan ugeysanay. Maanta, runtii shaqooyinka iyo mashaariicdu si dhakhso leh ayaa loo xaliyaa. Haddii ay tahay degmadu ama dawladda, waxay naga caawinaysaa in sida ugu dhakhsaha badan loo xalliyo dhibaatooyinka. ” Madaxweynaha degmada Ayar dhamaadka khudbadiisa, wuxuu u rajeeyay in kulanka uu noqdo mid wax ku oolka ah.
KU SAABSAN SHAQAALAHA
Kadib khudbadii Duqa İrfan Ayar, Adnan Köşker, Duqa magaalada Gebze wuxuu soo bandhigay bandhiga bandhiga oo ay weheliso bandhig adeeg. Duqa magaalada Gebze Adnan Köşker, oo muujiyey taageerada iyo tabarucaada laamaha dhalinyarada ee xisbiga AK Party, laamaha haweenka iyo ilma adeeradooda heerka koowaad, ayaa ku bilaabay khudbadiisa ereyada: Duqa magaalada Köşker wuxuu cadeeyay inay qaabeeyeen mashaariicdii lagu kasbaday Gebze iyadoo la waafajinayo baahida muwaadiniinta waxaana uu yidhi, inden Mid kamid ah cabashooyinka ugu waaweyn ee dadka Gebze iyo ganacsatada suuqayada ayaa ah suuqyada ay ahayd in laga furo wadooyinka. Tan darteed, waxaan dhisaynaa goobo suuqyo xiran oo ku habboon magaalada casriga ah.
SIDIIDKA SIDIIDKA SIDII AY U LEEYIHI KARAA SIDOOBADA LAGU SAMEEYO
Ka sokow la kulanka baahiyaha suuqa ee deggeneyaasha xaafadaha, suuqyadan ujeedooyinka badan leh waxaa loo isticmaalaa sida meelaha aroosyada, shirarka iyo nashaadaadyada loogu talagalay dhalinyarada lagu qaban karo. Meesha Sataxa ah ee Tatlsedkuyu wuu dhammaaday oo hadda wuxuu u shaqeeyaa dadka gobolka, sidoo kale Adem Yavuz iyo Mevlana Meesha meheradda Suuqa waa la xiray. Gaar ahaan Mevlana xiran Suuqa Suuqa waxaa loo wareejin doonaa suuqa jimcaha si weynna wuu u nasan doonaa Gebze. Marka lagu daro mashaariicdayada socda, Kirazpinar, Ulus iyo Istasyon Closed Bazaar waxay diyaar u yihiin mashaariicda mustaqbalka. Marka mashaariicdan la hirgaliyo, ma jiri doono suuq ku yaal jidadka Gebze. ”
FURAHA FARSAMADA IYO FARSAMADA FASAHA
Duqa magaalada Köşker wuxuu mar kale ku celiyay injiilka in Adventure iyo Aksiypn Park, oo ah mid ka mid ah mashaariicda ugu weyn ee u rogi doona Gebze iyo Eskihisar, oo ah irridda degmadu u weeciso dhanka badda, oo noqonaysa xarun soo jiidasho leh, oo la isticmaali doono bisha Abriil, arı furmi doonaa maalin wanaagsan. Xadiiqadan, buurta fuulitaanka ee loogu talagalay dhalinyaradayada waxay ka koobantahay buuro dhaadheer iyo kafateeriyado leh meelo cagaaran oo ka kooban dhir kala duwan. Waxaa jira meelo afar keliya la Gebze dalka Turkiga. Sababtaas awgeed, waxaan fileynaa in meeshani ay soo jiidanayso dadka ka kala yimid gobollada deriska ah. ”
GAADIIDKA HORSE RIDING CLUB
Duqa magaalada Köşker ayaa khudbaddiisa ku sheegay mashruucyo loogu talagalay dhalinyarada oo uu yiri, yan Waxaan sidoo kale leenahay mashaariic horumarineed. Meelaha Madaddaalada Molla Fenari halkaas oo ay dhallinyaradeenu awoodi doonaan inay ku ciyaaraan qaybo badan oo kala duwan. Deegaanka Madadaalada Ovacik, Deegaanka Madadaalada Madadaalada, Deegaanka Madadaalada Pelitli halkaan waxaan rajeynayaa in aan dhiibi doono. Naadiga Veterans Mountain Equestrian Riding Club, 12 kun oo arday ayaa lasiiyay tababar ku saabsan barashada sinaanta ilaa iyo maanta. Waxaan sidoo kale ka dhiseynaa aag wadiiqo oo kale Ovacık. Aaggan, oo loo abuuri doono goobo furan iyo meelo xiran, ayaa soo jiidan doonta dadka xiiseeya ciyaaraha isboortiga ee ka socda Istanbul. Hadafkayagu waa inaan ka dhigno gobolka Gebze oo ah saldhigga gobolka ee howlaha sinnaanta iyo cayaaraha. ”
METRO WAA INUU YAHAY 2023
Duqa magaalada Köşker, oo daah furay mashruucyada gaadiidka ayaa yiri, “Waxaa jiray mashruuc taraam lagu xalliyo taraafikada Gebze, laakiin kala duwanaanshaha sare ee Gebze iyo jidadka ciriiriga ah ee degsiimooyinka hore, go'aan aad u muhiim ah ayaa qaatay Dawladda Hoose ee Magaalada Kocaeli. Qandaraaska labaad ee mashruuca tareenka dhulka hoostiisa ayaa dhici doona waxaanan rajeynayaa inuu diyaar u noqon doono 2023. Imaatinka tareenka dhulka hoostiisa kadib 2023, rarka taraafikada ayaa si weyn hoos loogu dhigi doonaa ”.
XARUNTA SAYNISKA IYO ARRIMAHA
Duqa magaalada Köşker wuxuu sheegay inay ahmiyad weyn siinayaan mashaariicda Gebze iyo sidoo kale nashaadaadka howlaha bulshada degmada “Waxaan gacan ka geysaneynaa dhaqanka, isboortiga, waxbarashada iyo nolosha bulshada ee gobolka annaga oo leh Xarumaha Saayniska iyo Farshaxanka. Saldhigga iyo xarumaha sayniska iyo farshaxanka ee Beylikbağı; maktabadaha, xarumaha tababarka iyo hoolalka ciyaaraha. Sidan, waxaan la kulannaa dhammaan baahiyaha gobolka. Waxaan sameyneynaa Arapcesme Science Center iyo Art. Xarumahan, oo ku yaal hoolka arooska, waa xarumo joogto ah. Kirazpınar Sayniska iyo Xarunta Farshaxanka waxay ku habboonaan doonaan meesha suuqa xiran, mashruucu wuxuu noqon doonaa mid ka mid ah xaafadaha ugu quruxda badan ee Gebze ee xaafadeena Kirazpinar.
MAGACA SAACADAHA MASHRUUCYADA
Adnan Köşker, Duqa magaalada Gebze, oo muujiyay farxadda iyo barwaaqada muwaadiniinta Gebze ee ku saleysan ficilada iyo mashaariicda, ayaa soo gabagabeeyay bandhigiisa isagoon u aadin qeybta su'aasha iyo jawaabta: Waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo Wasiirradayada, Xildhibaanada, Guddoomiyaha Gobolka, Duqa Magaalada, Guddoomiyaha Gobolka, Guddoomiyaha Degmadda, Madaxweynaha Degmadda iyo inaad aad u qadiseen Gebze. ”
Mashaariicda sida Buundada 3aad, Gegada Diyaaradaha 3aad iyo Canal Istanbul ini
Kharashka warshadaha ayaa hoos u dhigi doona tareenka
Goobidda iyo celinta cufnaanta ayaa hoos u dhigi doonta Samsun taraamulka
La xiriir Adnan si toos ah